Global Voices teny Malagasy » Andeha Hiarahaba Ireo Mpikambana Roa Vaovao. Manaraka Izany: Mila Anao Izahay Ho An’ny NewsFrames! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Marsa 2017 14:04 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, NewsFrames
Mijery tsara avokoa ny rehetra ao amin'ny NewsFrames ary faly izahay manambara ireo fanampiny roa vaovao ao amin'ny ekipanay: Belen Febres-Cordero  sy Nevin Thompson. 
Efa mahafantatra an'i Nevin ny sasany aminareo satria mpikambana mavitrika eto amin'ny tontolon'ny GV izy ary faly izahay manana an'i Belen nanatevin-daharana ny fiarahamoninay.
Nanambara ny fiarahamiasan'ny NewsFrames-Rising Voices izahay tamin'ny volana Janoary, ka miezaka izahay amin'izany mba hampihatra ireo fitaovana sy fahaizana momba ny fanadihadiana tahiry mikasika ny olana amin'ny fisoloantenan’ ireo vondrom-piarahamonina atao anjorom-bala ao amin'ny haino aman-jery mahazatra sy ny media sosialy. Nanatevin-daharana ny NewsFrames ho mpitarika ny Fiarahamonina Rising Voices i Belen.
Mpanao gazety sy Mpikaroka i Belen Febres-Cordero ary nisoratra anarana tamin'ny fandaharana dokotorà momba ny Fifandraisana izy ankehitriny, manadihady izay fifandraisana mety misy eo amin'ny haino aman-jery hafa sy ny fahasalam-behivavy. Nandray anjara tamin'ny tetikasa isan-karazany momba ny zon'olombelona tao Amerika Latina sy Kanada izy, anisan'izany ny asany tao amin'ny Foibem-pikarohana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (IDRC) sy ny UNICEF .
Nevin Thompson kosa dia tonian-dahatsoratr'i Japana ato amin'ny Global Voices. Nanatevin-daharana ny Global Voices tamin'ny taona 2005 izy ary iray amin'ireo mpikambana mavitrika indrindra ato amin'ny fiarahamonina GV. Mpandika teny, mpanoratra sy mpanao gazety izy ary hita ao amin'ny Quartz sy ny Public Radio International ihany koa. Nanatevin-daharana ny NewsFrames amin'ny maha-mpitarika ny Fifandraisana sy ny Fanoloran-tena i Nevin.
Ho an'i Belen, ny asa fanaovan-gazety dia fitaterana ireo raharaha tsy tsara tatitra ary mahaliana azy ny fahatakarana sy ny fanatsarana ny fakam-baovao: “Fantatro fa ho lasa mpanao gazety aho fony mbola 6 taona. Na izany aza, tany am-piandohan'ny fianarako taona voalohany momba ny Fanaovan-gazety sy ny Zavakanto Liberaly tany Ekoadaoro, tanindrazako, tsapako fa tsy mba manome tati-baovao feno matetika ny haino aman-jery mahazatra sy ny media sosialy kanefa mila lazaina izany tantara isan-karazany izany. “Manantena i Belen, Mpitarika ny Fiarahamonina Rising Voices ny : “hitozo hiasa eo amin'ny toeram-pifanojoan'ny fampiharana sy ny fikarohana momba ny fifandraisana, mikendry ny handray anjara amin'ny famoronana sy ny famezivezena ireo tantara manan-danja izay mbola tsy re mihitsy.”
Niasa ho Mpitarika ny Fandraisana Anjaran'ny Mpamaky tato amin'ny Global Voices kosa i Nevin nanomboka tamin'ny Marsa 2015 miaraka amin'ny andraikiny maha-tonian-dahatsoratr'i Japana azy. “Manana fototra eo amin'ny haivarotra vokatra rindrambaiko aho, ary izany no iray amin'ireo antony nahaliana ahy tamin'ny tetikasa NewsFrames. Mampiasa Media Cloud ho fitaovana fototra ny NewsFrames, ary fitaovana rindrambaiko mahery vaika ny Media Cloud izay afaka manome lanjany be dia be ho an'ny mpanangom-baovao. Ny fanamby, anefa, dia ny manazava ny lanjan'ilay fitaovana sy mikaroka ny fomba hitondrana ireo mpiserasera hizatra amin'ilay fitaovana. Ka izany no zavatra ataoko, ary nahafinaritra ahy ny manana fahafahana hanao izany eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. “
Tsy hijanona manoloana ny zava-tsarotra izahay. Ka inona no nataonay tato ho ato?
Jereo ny vaovao farany momba ny andrana vaovao noforoninay : ezaka manazava ny vaovao diso sy namboarina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Momba an'i Belen, miantso fiarahamiasa amin'ny Rising Voices Marginalia izahay. Ny fanadihadiana voalohany niarahanay niasa tamin'ny MIT Media Lab dia nifantoka tamin'ny vondrom-piarahamonina tompotany ao Amerika Latina, sy tao amin'ny toby Standing Rock ao Amerika Avaratra nandritra ny 2016-2017, afaka mamaky izany ato  ianao.
Hamoaka toro-lalana amin'ny fampiasana ny Media Cloud hanaovanao fikarohana izahay atsy ho atsy, no sady manohy manangana ny NewsFrames.
Ary tsy izany ihany! Mikasa hanatontosa fanadihadiana bebe kokoa izahay ary faly mandray ireo hevitra sy feo avy amin'ny fiarahamonina GV. Raha liana amin'ny asa fanadihadiana ianao na hanampy anay amin'ny fikarohana firenena ao amin'ny Media Cloud, ampahafantaro anay izany azafady.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/30/97501/
 Nevin Thompson.: https://globalvoices.org/author/nevin-thompson/
 Foibem-pikarohana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (IDRC) sy ny UNICEF: https://www.linkedin.com/company/idrc?trk=ppro_cprof
 andrana vaovao noforoninay: https://newsframes.globalvoices.org/investigations/fabricated-news-experiment/